6 Amathiphu engongi Lapho zemininingwane Okuhambayo EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 6 Amathiphu engongi Lapho zemininingwane Okuhambayo EYurophu
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/01/2020)
Kwasukasukela, uma isabelomali akazange zinendima ngokukhetha izindawo (noma okungenani, hhayi njengoba enkulu indima!) izinto zazizimbi; kulezi zinsuku, uma sifuna ukuhamba, kudingeka sibe smart ngendlela esiphatha ngayo isabelomali sethu. Yize isitimela e-Europe kakhulu kukho isabelomali-friendly for wonke umuntu ufuna ukuzwa yamaprojekthi (futhi ukuphumula!) indlela ukuhamba, khona basengaba izimo isikhwama-eziyinkinga ufuna yokugqashula.
Ngakho, ukukusiza uthole okungcono kakhulu ikhambo lakho, siye waqoqa uhlu esikuzwayo kukhona imali phezulu kulondolozwa amathiphu isitimela wokujikeleza e-Europe.
Musa Kwekuheha at Peak Holiday Times
Yebo, lena okufanele uhambe ngaphandle ethi, kodwa kukhona akulimazi ukukhumbuze it waphinda. Uma kuziwa ukuqeqesha ojikelezayo e-Europe, amaholide ofuna yokugqashula ngokuyinhloko Christmas, Unyaka omusha, nama-Easter kanye nenyanga ka-August. Ngenxa yesizathu, le amanani sinyuke phakathi lezi izinyanga, ngakho ... emsebenzini kubo kancane.
Nakuba wazisa yini ukuhlola aseYurophu ufuna ukubona kuyinto uhlobo ngokungenabulungisa uyimbudane, esikwenzayo ke ngokulinganisa ngenxa yenu. Izincwajana zemininingwane e-Europe, uzothola ukuthi konke ku ukuphela entshonalanga indlela eqolo ngaphezu kwanoma block empumalanga. Ngakho, kuze wallet yakho sikhula, amabombo East uphinde uhlole ubuhle kulolu hlangothi Europe!
QAPHELA: Lapho eMpumalanga Yurophu, qiniseka ukuthi ayeke by ePrague (I-Czech Republic), Budapest (Hungary), Belgrade (Serbia), Bucharest (Romania), Zagreb futhi Split (Croatia), Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) futhi Moscow (Russia).
Gwema Class 1st Lapho zemininingwane Okuhambayo eYurophu
Awu, ngokusobala! namanje, ungabi omunye LABO izihambi ngubani "ngephutha" ahlale eklasini 1st. Kungani? Ngenxa uzogcina ukukhokha inhlawulo eqolo uma abanjwe luzodla ngaphezu ithikithi 1st class uqobo!
Incwadi Overnight Uqeqesha uma zemininingwane Okuhambayo eYurophu phakathi kwamazwe
izitimela Overnight, aka izitimela ebusuku kukhona iningi engabizi inketho European abahambi. Akukhona nje ukuthi ukulondoloza intengo embhedeni kodwa nawe uthole ukuzwa Europe kusukela nombono omusha lonke.
Awu, hhayi ngokoqobo epikinikini kodwa "stash" ukudla ekhaya, ngakho ungenawo thenga ukudla okubizayo ebhodini. Ngeke ugcine imali eshisiwe uma Thenga kakhulu awukudla esitolo!
Gwema Ukuthenga Advanced Amathikithi ku Ohambweni emifishane ngaphakathi Mainland Europe
Lapho isitimela e-Europe, alindele uma zizohamba ibanga elifushane ukuba pricier kunangabangamashumi eside; namanje, kukhona inzuzo yokuthi ayengawazi encwadini kusengaphambili okungadingi engeza ukuba izitike ngohambo lwakho kanye thriftiness ngakho. Lapho uya e izwekazi laseYurophu ungakwazi ukuthenga ithikithi esiteshini ngaphambi begibela isitimela.
Londoloza-A-zemininingwane kuyindlela engcono ukubhuka izindawo kumnandi ngamanani ezishibhile futhi ujabulele isitimela sakho e-Europe ne ucezu kwengqondo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ungumnikazi kuwebhusayithi, ungaxhuma yethu RSS Feed.
europeantravel europetravel amathiphu Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips